वर्षातमा हिलाम्मे, हिँउदमा धुलाम्मे हुने सडकमा थपियो गाडीलाई झाडीको समस्या ! – ebaglung.com
वर्षातमा हिलाम्मे, हिँउदमा धुलाम्मे हुने सडकमा थपियो गाडीलाई झाडीको समस्या !
२०७४ भाद्र २१, बुधबार १८:३४	Top News, थप समाचार
घनश्याम गौतम गल्कोट २०७४ भदौ २१ । सडकमा नाली नहुदा समस्या बर्षात संगै हिलाम्मे बनेका गलकोटका अधिकांश ग्रामीण सडकले अहिले झाडीको रुप लिन थालेका छन् । गलकोट नगरपालिकाको अधिकाशं सडकको नाली काटिएको छैन् भने दोहोरा अबात जाबतको लागी आबश्यक चौडाईको अभाब हुदाँहुद्रै पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा सडकमा साना तथा ठुला पहिरो झरेको र खाल्डाखुल्डी परेको सडकको मर्मतको आबश्यकता बढेसंगै सडको छेउ तथा कुनामा उम्रिएका बोट बिरुबा तथा झाडी सफाई गर्नु अति आबश्यक बिषय बनेको छ । सडकको चौडाई नभएको ठाउँमा त दुख सुख आबत जाबत गरिन्छ स्थानिय जिप चालक हेम पुनले भने सडकको कुना र छेउमा रेहको ऐसेलु, चौतारी, बनमारा, उत्तीस लगाएतका बोटविरुवाले गर्दा बाटो साघुरो भएको छ । जसले जीप तथा अन्य गाडीहरु आबातजाबत गर्दा स्क्याज भएका छन् ।
सडकको बास्तबीक चौडाई समेत झाडीले नदेखीने गरेको बताउदै अन्दाजको भरमा सबारी चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का सबारी चालक नितु बस्नेतले बताए । गलकोट नगरपालिका बाड नं ६ को चरौदीफाँटका केही स्थानमा ऐसेलु र बनमाराले गर्दा सबारी साधन आइरहेको समयमा पैदल यात्रुलाई साईड दिन समेत समस्या हुने गरेको स्थानिय कर्ण बहादुर खत्रीको भनाई छ ।
एक्लै हिड्दा सडकमा भएको झाडीमा जंगली जनाबर बसेमा समेत थाहा नपाईने अबस्था छ, खत्रीले भने जंगलको बाटो मोटरबाटो हो भनेर हिड्न कठिन छ, डर मान्नुपर्ने अबस्था छ ।
गलकोट नगपालीका बाड ६ को कायस भुजुङ्गे जाने जनहित मार्ग, बयली तोरीखोला रगेनी जाने शहीद मार्ग, हटिया लमाई काडेबास सडक, मल्म पाण्डबखानी सडक तथा अन्य ग्रामीण सडक खण्डको अधिकांश ठाँउमा छेउकुनामा उम्रिएका बोट बिरुबाको फडानी नहुदा यात्रामा जोखीम बढेको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको केही स्थानमा झाडी सफाई नहुदा घुम्तीमा दोहोरो सबारी आबत जाबतमा कठिनाई भएको छ । घुम्तीमा ठुला सबारी साधन संग मोटर साईकल ओहोरदोहोर गर्दा काँडाले कोर्तने गरेको स्थानीय पृथ्बी सुबेदीले बताए । समयमा सडको छेउछाउमा भएका झाडी तथा बोटबिरुबाको फडानी गर्नतर्फ सम्बन्धीत निकायले ध्यान पु¥याउनु आबश्यक छ । हिउदामा धुल्लाम्मे र बर्षतमा हिलाम्मे बन्ने ग्रमीण सडकमा पछिल्लो समयमा यस्तो समस्या बढ्दै गएको छ ।
गायक अधिकारीको समयले मलाई गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
ताराखोलामा निजी लगानीमा २२ किलोवाट क्षमताको बिद्युत उत्पादन